म इन्डी छान्नुहोस्! इंडियानापोलिस स्टार मा | Martech Zone
म इन्डी छान्नुहोस्! इन्डियानापोलिस स्टार मा
आइतबार, अगस्त 27, 2006 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
जोन केट्जेनबर्गरले एक राम्रो लेख्यो लेख on म इन्डी छान्नुहोस्! आजको इन्डियानापोलिस स्टारमा।
के राम्रो छ साइट भर्खरै भयो। राज्यलाई विचार गर्दै मात्र डड टुरिज्म नाराको लागि Your ००,००० भुक्तान गरिएको छ "तपाईंको इञ्जिनहरू पुनः सुरु गर्नुहोस्", यो राम्रो, स्वतन्त्र विचार देख्न स्फूर्तिदायी छ। - जोन केट्जेनबर्गर
प्याट कोयल र मैले यो कारणले साइट सुरू गर्यौं। त्यहाँ किन करोडौं भन्दा धेरै कथाहरू छन् किन मानिसहरू इन्डियानापोलिस छनौट गर्दछन्, र हामी लाग्छौं कि यो शव्द मानिसहरूमा पुर्‍याउनु महत्वपूर्ण छ जसले हामीलाई नक्सामा नदेखे पनि। साथै, यो ब्रोगोस्फीयरको लागि उत्तम प्रयोग हो ... मलाई यकिन छैन कि अरू कसैले पनि उनीहरूको स्थानीय क्षेत्रको प्रचार गर्नको लागि यस्तै केही गरेको छ।
तपाईंको ब्लग दलाल
व्यापार सप्ताह अनलाइन पोल: तपाईंको मनपर्ने ब्लग के हो?